Kalsoonida iyo sameeynta ay ku leedahay nolosha qofka. - Caasimada Online
Home Warar Kalsoonida iyo sameeynta ay ku leedahay nolosha qofka.
Kalsoonida iyo sameeynta ay ku leedahay nolosha qofka.
Waxaad mararka qaarkood moodaa in dadbadani anay ogeeynba muhiimada ay kalsoonudu leedahay, iyo doorka weyn ee ay leedahay. kalsoonidu runtii waa awooda koowaad ee nafta hogaamisa kuna dhiiri galisa fal kasta oo ay qabanayso.
Hadii qofku aanu kalsoni lahayn runtii aadbay u adagtay inuu nolol fiican ku noolaado inta uu aduunyaada joogo waayo, kalsooni ddaradu waxay leedahay mushkiladao badan sida cabsi badan oo nafta u timaada markastaba, wax kastana uu ka shaki qabo warwer & walaac farrabadan, go’aan la’aan anu marnaba go’aan gaadhi karin kalidii una bahanyay inu dad badan oo kale kolba wax waydiiyo.
Xifaddaha kalsoonida lagu dhiso
Hadii aad ka shakido inay kalsooni dadu yar tahay isticmaal qodabadan soo socda:
1. badso cibaddada Allaah,
2.Yaree khaladaadkaga xaga bulshada dhexdeeda aad ka gasho ama Qooskina iyo asaxaabta.
3. Hadii aad ku guuleysan wayday wax yaabo aad rabtay inaad gaadho mustaqbalka, niyada gali aduunyadu waa kaaca kuf ee ha niyad jabin sii wadna waad gadhi doonta markastooy noqataba.
4. Marka aad rabto inaad go’aan gaadho ama qorshe cusub samayeso ha ka tagin Xaqiiqda & sida suurta galka ah mararka qaarkood waxa niyad jabka keena talo aan suurta gal ahayn ood gaadho.
5. Cabir naftaada tijabo na kusamee adigoo xaqiiq ku socda tusaalo ahaan imise jeerbaad wax aad qabankareysay aad ku fashilantay, Naftaada u cadee waxa aad ku fiicantay iyo waxa aad ku xuntay, aadbay muhiim u tahay inuu qofku ogaado naftiisa.
Ogoow kuligeen dhaliilo badan baynu leenahay, qofna ma dhameystira lakiin naftaada kalsooni ku qab iyo noocay tahay barana dabeecadaha dadka kale ee ku gu hareeraysan, si aad faa’iido uga hesho waxna uga baratid iyo si aad uga baydho dhibta ku qalafsan ee mushkilada inagula dhex jira heen iyo maalinba.